घुर्बिसेपञ्चमी बजारमा खानेपानीको अभाव « Mechipost.com
प्रकाशित मिति: २५ जेष्ठ २०७९, बुधबार १३:३२
विगतमा खानेपानीका लागि प्रयोगमा रहेका मुहानहरु क्रमशः सुक्दै जानुका साथै कतिपय मुहानबाट ल्याइएको पानी बन्द भएपछि घुर्बिसेपञ्चमी बजारमा खानेपानी अभाव खड्किँदै गएको हो । अहिले निकै कम मात्रै पानी यहाँका धारामा आउने गरेको छ । पानी कम भएपछि पानी भर्न रातभरी पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयवासीको भनाई छ । अझ, बर्खा लागेपछि स्वच्छ पानी नआउने र धमिलो पानी पिउनुपर्ने स्थानीयवासीको बाध्यता छ ।
घुर्बिसेपञ्चमी बजार ब्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष देवीचन्द्र आङदेम्बेका अनुसार विगतमा स्थानीय स्तरका मुहानहरुबाट समेत प्रशस्तै पानी आउथ्यो । यहाँ रहेका धाराखोल्सा, बोहोराटोल लगायत मुहानबाट बजारमा पानी ल्याउने गरिएको थियो । यस्तै फिदिम नगरपालिका–८ इथुङबाट पाइपलाइनमार्फत पानी लगिएको थियो । तर इथुङका स्थानीयवासीले मुहान थापेर पानी स्थानीयस्तरमै प्रयोग गर्न थालेपछि निकै कम मात्रै घुर्बिसेपञ्चमी बजारका लागि प्रवाह हुने गरेको छ ।
पाँचथर र इलामको सीमामा रहेको घुर्बिसेपञ्चमी बजारमै फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अस्थायी केन्द्र भएपछि ब्यापारिक चहलपहल झनै बढ्न थाल्यो । राँके–रबि–भेडेटार सडकले समेटेको यस बजारमा उक्त सडक कालोपत्रे हुने भएपछि वरिपरीको गाउँका स्थानीयवासीको आकर्षण बढ्दै गयो । बजारमा बसाईं सरेर आउनेको सङ्ख्या बढेसँगै घरहरु थपिँदै गए, जनसङ्ख्या बढ्दै गयो ।
खानेपानी समस्या समाधानका लागि फाल्गुनन्द गाउँपालिका पाँचथर र फाकफोकथुम गाउँपालिका इलामले करीब रु. ३५ लाख रकम संयुक्त रुपमा लगानी गरी तीन वर्ष अघिबाट यहाँ डिपबोरिङ सञ्चालनमा ल्याएका थिए । स्थानीयवासीका अनुसार केही समय नियमित सञ्चालन भएतापनि डिपबोरिङमा दैनिकजसो समस्या आई स्थानीयवासीको आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन् । विद्युत महशुल महङ्गो पर्ने, विद्युत नियमित नहुँदा डिपबोरिङबाट पानी ननिस्कने तथा डिपबोरिङ विग्रिइरहने समस्या देखिएको छ ।
डिपबोरिङबाट सानो पानी प्रवाह हुने भएपनि शुल्क भने प्रतिघर मासिक न्यूनतम रु. २५० पर्न जाँदा स्थानीयवासीले उक्त शुल्क तिर्न गाह्रो मान्ने गरेका छन् । बजार धेरै उचाइमा भएका कारण खानेपानीका लागि अन्य उपयुक्त मुहान प्राप्त नहुँदा खानेपानीको समस्या परेको हो । आङदेम्बेका अनुसार अहिले घुर्बिसेपञ्चमीका करीब ३०० परिवारले खानेपानीको समस्या भोगिरहेका छन् ।
खानेपानीको समस्या बिकराल बन्न लागेपछि गाउँपालिकाको प्रयासमा अहिले फाल्गुनन्द–३ चिम्फुलामा खानेपानीको मुहान लिई खानेपानी आयोजनाको निर्माण थालिएको छ । तर फाल्गुनन्द–४ पुरानोपञ्चमीका स्थानीयवासीले आफूहरु समेत स्वच्छ खानेपानीको सुविधाबाट बञ्चित भएको भन्दै उक्त पानी आफूहरुले समेत पाउनुपर्ने माग गर्दै अवरोध गरेका छन् । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय इलामले उक्त आयोजना निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको छ ।
अहिले इथुङ मुहानबाट आउने सानो पानी, स्थानीय कुवाहरु र डिपबोरिङबाट खानेपानीको प्रवन्ध गर्दै आएका छन् । बजारवासी देशकुमार रहपालका अनुसार हिउँदको समयमा यहाँ अत्यन्तै कम मात्रै पानी आउँछ भने बर्खामा धमिलो आउँछ । “डिपबोरिङमा समस्या आएको मात्रै सुन्छौं । पानीका विषयमा झगडा भएर कतिपय यहाँबाट बसाईं पनि गए”, रहपालले भन्नुभयो । बजारवासी मेनुका घिमिरे खड्का पानी भर्न रातै भरी पालो कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको वताउनुहुन्छ ।
फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष बृजहाङ आङदेम्बे निर्माणाधीन आयोजनाको विवाद चाँडै समाधान गरी आयोजनालाई पूर्णता दिने वताउनुहुन्छ । “पुरानो पञ्चमीवासीसँग सहमति जुटाई चाँडै आयोजना निर्माण अघि बढाउछौं”, आङदेम्बेले भन्नुभयो, “मैले जिम्मेवारी पाएदेखि नै यसका लागि पहल थालेको छु ।”